अन्योलमा समृद्धि सपना- विचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ८, २०७६ दुर्गाप्रसाद पौड्याल
सरकार ऐतिहासिक रूपले दुईतिहाइ बहुमतवाला भएर पनि आमजनले त्यसको सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा, हृदयेश त्रिपाठीले भनेझैं, कर्मचारीतन्त्रले नचाहेका कारण जो आए पनि उस्तै भएको हो वा राज्यका आधारभूत संरचना एवं रणनीतिक लक्ष्यहरू भूराजनीतिक वस्तुस्थिति र चरित्रसँग तालमेल नखाएर व्यवस्थागत असफलता देखिन थालेको हो भनेर केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालको भूबनोट उत्तरतर्फबाट उच्च हिमाली पहाडबाट भिरालो हुँदै दक्षिणी गंगा मैदानको तराई क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । हिमनदीहरूको पानीलाई कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकालीहरूले पहाड, तराई हुँदै भारतको गंगा नदीसम्म निकास गर्छन् । तिनै नदीहरूबाट पोषित हजारौं खोलाखोल्साले यहाँका गाउँ–बेसीमा सिंचाइ पुर्‍याउँछन् ।
विगतमा हिमाल र पहाडमा भएका घना जंगलहरूले मनसुनी वर्षालाई सोसेर विभिन्न मूलबाट गाउँघरका धारा–कुवासम्म खानेपानी पुर्‍याउँथे । दक्षिणतर्फ चुरे पहाड र चारकोसे झाडीले हिमाल र पहाडबाट बगेको पानीलाई कमलो माटो गेग्रानबाट भूमिगत जलभण्डारमा पुनर्भरण गरी तराईका खेतहरूमा उर्वरता र चिसोपन पुर्‍याउँथे । त्यहाँका होली, इनार, चापाकलहरू पानीले भरिभराउ हुने गर्थे । अब त्यो रहेन । विगतका दशकहरूदेखि बन्दै गरेका जलविद्युत् योजना, बाटो खोल्नमा डोजरको जथाभावी प्रयोग, तीव्र सहरीकरणमा बढ्दो बालुवा–सिमेन्ट–डन्डीको प्रयोग, नदीहरूबाट बालुवा–ढुंगाको दोहन, चुरे–चारकोसे झाडीको अतिक्रमण जस्ता कारणले मरुभूमीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । वातावरण परिपूरणमा जुन तहको लगानीको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतसाधन तथा संयन्त्रको अभाव छ ।
यिनै भौगोलिक अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर चार–पाँच दशकदेखि राज्य संयन्त्रको विकास गरिएको थियो, जसमा केन्द्रमा बलियो सरकार, उत्तर–दक्षिण जोडिएका पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्लामा जिल्ला विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्राधिकारप्राप्त जिल्ला विकास समिति तथा केन्द्र सरकारका कार्यालयहरू र त्यसभन्दा तल करिब चार हजार गाविस र नगरपालिका थिए । यो संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जसमध्ये स्व. डा. हर्क गुरुङको २५ जिल्लाको अवधारणा एउटा विकल्प हो । तर २०६३ को परिवर्तनपछि राज्यको पुनर्संरचनाको हौवामा ती सबै भत्काएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारसम्पन्न ७ प्रदेश र ७५३ गाउँ र नगरपालिका बनाइए । यो संघीय ढांँचामा पुनर्संरचना गर्नुको उद्देश्यबारे यसका अभियन्ताहरू स्पष्ट छैनन् । नयाँ संयन्त्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन न त अनुसन्धान, मानवीय संसाधनको विकास, तालिम आदि सञ्चालन भएको देखिन्छ, न शासन सञ्चालनमा विगतको केन्द्रीकृत चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छ । यसले नेपालको भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने खतरा देखिँदै छ ।
केही दशकअघिसम्म कृषि निर्वाहमुखी थियो, तर निर्वाहको लागि पलायन हुनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यस्तै धेरै खाद्य सामग्री घरमै तयार हुन्थ्यो । त्यसैले गाउँको अर्थतन्त्र केही हदसम्म आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले गाउँ पनि बजारमुखी भएको छ । मोबाइल फोन, टीभी, ग्यास चुलोदेखि लिएर खाजाको लागि चाउचाउ, कोकाकोलासम्म पसलमा किनिन्छ । निजी स्कुलको फिस र प्राइभेट स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचार खर्चको कुरै गर्नुपर्दैन । बढ्दो घर खर्चलाई कृषिले धान्न नसकेपछि अधिकांश युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । घरमा बाआमा, श्रीमती, केटाकेटीहरू छन् । यिनीहरूबाट पुर्खाले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषिमा आधारित दिगो कृषि विकास अघि बढ्न सम्भव छैन ।
त्यस्तै, पुर्खाहरूले थोरै कृषियोग्य भूमि भएको बुझेर भिरालो जमिनमा बस्ने र नदी किनारका मलिला फाँटहरूमा खेती गर्ने प्रविधि विकास गरेका थिए । तर नदी किनारहरूबाट सडक खनेपछि भिरालोमा बस्ने मानिसले तिनै मलिला फाँटमा घर बनाउन थाले । फलस्वरूप नदी किनारका मलिला खेतहरू पनि नासिए र गाउँका जमिनहरू पनि बाँझै रहे । आफ्नै जरो नास्ने यो विडम्बनालाई बदल्न सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।
नेतृत्वको गिर्दो नैतिक बल
राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बढ्दै गएको बेथिति र विसंगति बुझ्न कुनै पनि राष्ट्रिय खबरकागज पल्टाए पुग्छ । अधिकांशमा कुन–कुन नेता, कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया मिलेर कुन–कुन योजनाबाट कति खाए भन्ने फेहरिस्त हुन्छ । निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरणमा प्रमाण कसरी नष्ट गरियो भन्ने रिपोर्ट टेलिभिजनबाटै प्रसारण गरियो । यस्ता कैयौं घटनाका खोजपूर्ण रिपोर्टहरू पत्रकारहरूले उजागर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा भएको बेथिति हटाउन डा. गोविन्द केसी कैयौं पटक अनशन बसे । तर त्यसको अपेक्षित प्रभाव परेन । त्यस्तै, कुन पदाधिकारी, राजदूत, न्यायाधीश वा ठेकेदार कुन पार्टीको कुन गुटले कति पैसा खाएर नियुक्त गरेको हो भन्नेसम्मका खबरहरू सार्वजनिक हुन्छन्, जसको न खण्डन हुन्छ, न त कारबाही नै भएको सुनिन्छ । यस्ता गतिविधिका कारण संस्थागत विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ, पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता घट्छ र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक बल गिर्छ । यिनै कारणले गर्दा मन्त्रीहरूका निर्देशनहरू पालना हुँदैनन् ।
समृद्ध नेपालको यात्रा
२०६३ को परिवर्तनपछि त्यसअघिको इतिहासलाई प्रतिगामी करार गरेर पुराना संरचनाहरू भत्काइयो र सबै थोक नयाँ सिर्जना गर्न खोजियो । त्यसो गर्ने नै हो भने पनि नयाँ सिर्जना गर्न खोजिएको व्यवस्थाको समग्र चिन्तन र मार्गचित्र यसका रचनाकारहरूले बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो । तर यसका मुख्य रणनीतिकारहरू छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । यो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सशस्त्र क्रान्तिका दौरान युवाहरूलाई जेजस्तो सपना बाँडेर युद्धमा होमिएको थियो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ । संघीय गणतन्त्रको समग्र चिन्तन, रणनीतिक लक्ष्य र मूल्य–मान्यतालाई परिभाषित, स्थापना र पालना गर्नैपर्छ ।
हिमाल–पहाड–तराईका किसानहरूले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषि प्रणालीलाई विकास गरेर गरिखाने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । मुख्य कुरा, मुलुकको रूपान्तरण र उन्नतिको लाभ सबै तह र तप्काका नागरिकको जीवनलाई छुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने मुलुक द्वन्द्वको अनवरत चक्रमा फेरि फस्न सक्छ, जसले अन्ततः मुलुकको सार्वभौम सामर्थ्य र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउँदै विघटनतर्फ धकेल्न सक्छ ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:५२
मुस्लिम स्वादको फुटबल
‘हाम्रो पूर्खा कश्मीरबाट आए पनि हामी पक्का नेपाली मुसलमान हौं । अझ मैले त नेपाली फुटबल टिमबाट पनि खेलें ।’
माघ ८, २०७६ हिमेश
काठमाडौँ — कमलाक्षीबाट असन झर्दा त्यहाँको आरसीटी भइहाल्यो । जनबहालतर्फ पुग्दा मछिन्द्र । ढोका टोलतिर काठमाडौं क्लब । अनि पाकोतिर ब्वाइज स्पोर्टस । टेबहालको संकटा क्लब भइहाल्यो । सँगै एनआरटी । ठ्याक्कै भित्री काठमाडौंमा ‘ए’ डिभिजनका क्लबको कुनै कमी छैन । अथवा भनौं कम्तीमा कुनै न कुनै समय ‘ए’ डिभिजन खेलेका धेरै क्लब यता छन् । अब प्रश्न मखन इन्द्रचोकको चाहिँ कुनै फुटबल क्लब थियो त ? कि छैन नै ?
मखन इन्द्रचोक भनेपछि छेउकै कश्मीरी बजारको नाम आइहाल्छ । त्यहाँ धेरै अगाडि कश्मीरबाट आएर व्यापार गरेका मुस्लिम समुदाय पाइन्छ । यी मुस्लिम त हुन्, तर व्यापार गर्छन्, विवाहित नारीका लागि अत्यावश्यक पोतेको । त्यति मात्र कहाँ हो, उनीहरू मज्जाले नेपाल भाषा बोल्छन् र आफूलाई नेवार मुस्लिम समेत भन्न गर्व गर्छन् । गज्जब छैन र यो सबै तथ्य ? गज्जब त के छ भने उनीहरूको आफ्नै फुटबल क्लब पनि थियो । २००७ सालको छेउछाउ ।
खुबै लोकप्रिय थियो भनिन्छ, यो क्लब । अनि नाम ? आकाश भैरव क्लब । अब यसलाई मखन इन्द्रचोकको फुटबल टिम नभनेर सुख छ र ? यसको स्थापना गर्ने खेलाडी थिए, समसुद्दिन । उनलाई यो नामले कमैले जान्छन् । बरु शम्भु भनेपछि सबैले चिन्थे, त्यो ताका । यस्तो किनभने उनी आफ्नो जमानाका तगडा फुटबल खेलाडी थिए । त्यसमाथि उनी परे, राजा त्रिभुवनका मिल्ने साथी । समसुद्दिनको गुच्चाटोलमा घर थियो, अझ ठ्याक्कै हेंग्वा गल्लीमा घर थियो भन्दा हुन्छ ।
त्यहाँ त्रिभुवन आफैं आउने जाने गर्थे, समसुद्दिनलाई भेट्न । उनले आकाश भैरव टिमबाट मात्र खेलेनन्, त्यो बेलाको नामी नरेश एघारबाट पनि खेले । अहिले यो सबै चर्चा किनभन्दा यिनै समसुद्दिनका छोरा अफ्ताब उद्दिन त्यो समयको नेपाली फुटबलको इतिहास बताउन सक्ने थोरै स्रोतमध्ये एक हुन् । खुबै चाख मानेर उनी त्यो समयको फुटबल इतिहास भन्ने गर्छन् । उनी अचेल ७६ वर्षका भए । उनलाई पनि धेरैले खास नामबाट चिन्दैनन् ।
‘नेवाः मुस्मां’ भन्नुपर्छ, त्यसपछि भने सबैले चिन्ने हुन्छ, त्यसो भनेको नेवार मुसलमान । ‘ओहो, उब्लेया फुटबल’ उनी दोहोर्‍याएर नेपाल भाषामा यस्तै भन्न गर्छन् । अर्थात् ‘त्यो समयको फुटबल’ । उनको परिचय यत्तिकैमा मात्र टुंगिन्न । अहिले सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनको फुटबल चलिरहेको छ । यसको लामो न लामो इतिहास छ । लिग त ०११ सालदेखि सुरु भएको हो । सुरुआती वर्षमा कुन टिमले लिग जितेको थियो । खाली त्यसको नाम मात्र छ, अरू थुप्रै जानकारी अब रहेन ।
त्यसमध्ये ०२२ सालको लिग जित्ने टिम थियो, विद्या व्यायाम मन्दिर । यसका एक प्रमुख खेलाडी थिए, प्रसिद्ध योजनाविद् हर्क गुरुङ । सुशील राणाले बागदरबारमा हुर्काएको बढाएको यो क्लबका अर्का प्रमुख खेलाडी हुन्, यिनै अफ्ताब । जब्बर डिफेन्डर थिए । त्यति बेला डिफेन्डरको काम नै डरलाग्दो ट्याकल हान्ने हुने गर्थ्यो । जसले जति बढी डरलाग्दो ट्याकल गर्न सक्थ्यो, त्यो उत्तिकै राम्रो डिफेन्डर हुन्थ्यो । अफ्ताब यस्तै खेलाडी थिए, विपक्षीका फरवार्ड उनीसँग जुध्न पनि डराउँथे । त्यसैले उनी कुनै समय ज्यानमारा डिफेन्डर भनेर पनि बदनाम भए । तर उनी सधैं यस्तै खेलाडी रहेनन्, उनको विद्या व्यायाम मन्दिर जनताले मन पराएको क्लब थियो, किनभने यसले पस्कने खेल सफा र सुग्घर हुन्थ्यो । त्यसो भनेका विद्या व्यायामले खेल्ने शैलीमा भलादमीपन पाइन्थ्यो । यी बाउछोराले एकपल्ट फरक फरक टिमबाट पनि खेले । समसुद्दिन पनि आफैंमा डिफेन्डर थिए, बुवाकै खेल पछ्याएर उनी पनि डिफेन्डर भएका थिए ।यी दुई खेलाडीमा एउटा ठूलो अन्तर पनि थियो । त्यो थियो, बुवा समसुद्दिनले कहिले पनि बुट लगाएर खेलेनन्, खाली खुट्टा नै खेले ।
अफ्ताबले भने कहिले पनि खाली खुट्टा खेलेनन्, बुट लगाएरमात्र खेले । उनले सबैभन्दा पहिले संकटाबाट खेले । पछि एनआरटीबाट । विद्या व्यायामसँग पनि जोडिए र बाँकी खेलजीवन त्यही टिमबाट मात्र खेले । उनको परिचय यत्तिमै मात्र टुंगिएन । खासमा उनी हुन्, नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने पहिलो पुस्ताका खेलाडी ।
सन् १९६३ मा नेपालले आगा खाँ गोल्डकप खेलेको थियो, त्यो बेलाका पूर्वी पाकिस्तानमा । अब त यो बंगलादेश भयो नै । यो नै नेपाली टिमले खेलेको पहिलो प्रतियोगिता हो । आरबी राजाको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय टिम ढाका गएको थियो । प्रशिक्षकदेखि टोली नेता सबै नरशम्शेर थिए । साता दिनको अभ्यासपछि नै नेपाली टिम ढाका उडेको थियो । छोटो समयको तयारी कारण टिमबीच खासै तालमेल भने हुन सकेको थिएन ।
पहिलो खेल ढाका वन्डर्सविरुद्ध थियो, त्यसमा नेपाल ७–१ ले पराजित रह्यो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट एकमात्र गोल गर्ने खेलाडी थिए, प्रकाश राणा । त्यसपछि ढाका पुलिसविरुद्ध खेल थियो, जसको नतिजा २–२ को बराबरी रह्यो । त्यसमा नेपालबाट एक गोल त प्रकाशले नै गरे, अर्को गोल बच्चु राणाले । नेपालको तेस्रो खेल इन्डोनेसियाली टिमविरुद्ध थियो । ढाकाबाट फर्केयता उनले केही समय फुटबल खेले र त्यसपछि संन्यास जस्तै लिए ।
यस्तोमा उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने पहिलो मुस्लिम खेलाडी हुन् । अझ भनौं, अहिलेसम्मकै एकमात्र मुस्लिम खेलाडी । यसमा भने उनलाई खुबै गर्व छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा उनी मंगलबार आए र खुबै छाए । आफ्नो अनुभव उत्तिकै चाख मानेर सुनाए । त्यसक्रममा उनले अन्त्यमा भने, ‘हाम्रो पूर्खा कश्मीरबाट आए पनि हामी पक्का नेपाली मुसलमान हौं । अझ मैले त नेपाली फुटबल टिमबाट पनि खेलें । यो आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’
प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०८:५१